လီဗာပူးနှင့် စပါးတို့ အခက်တွေ့နိုင်သည့် ချန်ပီယံလိဂ် အုပ်စုများ ထွက်ပေါ်၊ ယူအီးအက်ဖ်အေ အကေ?? - Yangon Media Group
လီဗာပူးနှင့် စပါးတို့ အခက်တွေ့နိုင်သည့် ချန်ပီယံလိဂ် အုပ်စုများ ထွက်ပေါ်၊ ယူအီးအက်ဖ်အေ အကေ??
၂ဝ၁၈-၁၉ ဘောလုံးရာသီအတွက် ချန်ပီယံလိဂ်အုပ်စုများကို မဲနှိုက်ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ရာ လီဗာပူးနှင့် စပါးအသင်းများမှာ အုပ်စုကျပ်များအတွင်းကျ ရောက်ခဲ့ပြီး ဂျူဗင်တပ်နှင့်မန်ယူတို့ တစ်အုပ်စုတည်းကျရောက်နေခြင်း ကြောင့် စီရော်နယ်ဒိုအနေဖြင့် အိုးထရက်ဖို့ဒ်သို့ တစ်ကျော့ပြန်ရောက်ရှိလာဦးမည် ဖြစ်သည်။
လီဗာပူးအသင်းမှာ ပီအက်စ်ဂျီ၊ နာပိုလီ၊ ဇဗက်ဒါအသင်းများနှင့် တစ်အုပ် စုတည်းကျရောက်နေခြင်းဖြစ်ပြီး စပါးအသင်းမှာမူ ဘာစီလိုနာ၊ အင်တာမီလန်၊ ပီအက်စ်ဗွီအသင်းများနှင့် ရင်ဆိုင်ကစားရမည်ဖြစ်သည်။ အခြားအင်္ဂလိပ်ထိပ်သီးများတွင် မန်စီးတီးက ရှက်တာဒိုးနက်၊ လိုင်ယွန်၊ ဟော့ဖန်ဟိမ်းတို့နှင့် တွေ့ဆုံကစားရမည် ဖြစ်ပြီး မန်ယူမှာ ဂျူဗင်တပ်၊ ဗလင်စီယာ၊ ယန်းဘွိုင်းအသင်းများနှင့် ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။
သုံးနှစ်ဆက်ချန်ပီယံ ရီးရဲလ်မှာ ယမန်နှစ်ဆီမီးဖိုင်နယ်ရောက် ရိုးမား၊ CSKA မော်စကို၊ ချက်ကလပ် ပလာဇန် အသင်းများနှင့် ရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်ကာ ယခုနှစ်ချန်ပီယံလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲကိုလက်ခံ ကျင်းပမည့် အက်သလက်တီကိုအသင်းမှာမူ ဒေါ့မွန်၊ မိုနာကို၊ ဘရုဂျက်အသင်းများနှင့် ကစားရမည်ဖြစ်သည်။ ချန်ပီယံလောင်းအသင်းများတွင် အပါအဝင်ဖြစ်သော ဘိုင်ယန်အသင်းမှာ ဘင်ဖီကာ၊ အေဂျက်၊ AEK အေသင် အသင်းများနှင့် ရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်ပြီး မဲမခွဲမီ အဆင့်သတ်မှတ်ရာ၌ မဲအိုး -၁ တွင်ရှိနေခဲ့သော လိုကိုမိုးတစ်မော်စကို ကြောင့် လိုကိုမိုးတစ်၊ ဂါလာတာစာရေး၊ ပေါ်တိုနှင့် ရှော်ကေးအသင်းများပါဝင် သောအုပ်စုမှ အားအနည်းဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။
ချန်ပီယံလိဂ်အုပ်စုအဆင့်ပွဲစဉ်များကို စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်တွင် စတင်ကစားမည်ဖြစ်ပြီး ယခုနှစ်ဗိုလ်လုပွဲကို အက်သလက်တီကိုအသင်း၏ အိမ်ကွင်း ဖြစ်သော ဝန်ဒါအားကစားကွင်းတွင် ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ချန်ပီယံလိဂ်မဲခွဲခြင်းနှင့် တစ်ချိန်တည်းတွင် ယူအီးအက်ဖ် အေ၏အကောင်းဆုံးဆုများကို ပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ရာ အကောင်းဆုံး အမျိုးသားအားကစားသမားဆုကို ရီးရဲလ်ကွင်းလယ်လူ မိုဒရစ်က ဂျူဗင်တပ်တိုက်စစ်မှူးစီရော်နယ်ဒိုနှင့် လီဗာပူးတိုက်စစ်မှူးဆာလက်တို့ကို ကျော်လွန်ရရှိခဲ့သည်။ ယမန်နှစ်ချန်ပီယံလိဂ်၏နေရာ အလိုက်အကောင်းဆုံးဆုများကိုလည်းပေးအပ်ခဲ့ရာ ရီးရဲလ်ဂိုးသမား နာဗက်စ်၊ နောက်ခံလူရာမို့စ်၊ ကွင်းလယ် လူမိုဒရစ်နှင့် တိုက်စစ်မှူးစီရော်နယ်ဒို တို့ကရရှိသွားခဲ့ကြသည်။
လိဂ်ဖလားပြိုင်ပွဲ တတိယအဆင့်တွင် လီဗာပူးနှင့် ချဲလ်ဆီး တွေ့ဆုံ
မွန်ပြည်နယ် အတွင်းရှိ အခြေခံပညာကျောင်း ၇၆ ကျောင်းကို အဆင့်တိုးမြှင့် ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြု
ရေတံခွန်တောင်စီးတီး ဂေါက်ကွင်းအိမ်ရာ စီမံကိန်းတွင် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းပေါင်း ၁ဝဝဝဝေ??